Uma ucelwa ukuba uchaze ukuthi yini khachapuri ke uzokwazi ukuchaza ukuthi ephekwe Puff khekhe ne wanezela ushizi suluguni (noma ezinye). Kodwa lokhu, kholwa kimi, sincane kakhulu ukuchaza emangalisayo futhi ngobuhlanya esiphundu ezifana isidlo Georgian. Namuhla, kunamabandla izindlela eziningi echaza igxathu negxathu indlela ukupheka khachapuri ushizi Puff khekhe. imikhiqizo enjalo yenza ngokuyisisekelo ne ukwengeza ushizi, nakuba ngezinye izikhathi asetshenziswa cottage shizi. Futhi, ezinye emizi esikhundleni Puff khekhe isetshenziswa, isibonelo, i-bhotela. Kodwa mangisho ukuthi iresiphi yasekuqaleni futhi bendabuko Georgian eqala ngayo ukusetshenziswa Puff khekhe. Ukuze uqale, kufanele unqume onjani khachapuri ufuna ukupheka, futhi kanjani inhlama okudingeka ukwenze. Lapha sinikeza wena real iresiphi khachapuri ushizi Puff khekhe.
Uzodinga izithako ezilandelayo:
suluguni - 400-500 amagremu;
ibhotela - 2 wezipuni;
Puff khekhe - 1 kg.
Njengoba kuchazwe imikhiqizo kanye nobungako zabo, funda imiyalo yesinyathelo ngasinye, lapho ufuna ukulungiselela khachapuri ngaphandle kobunzima:
Suluguni ushizi is wagcoba on a grater indawo. Grater lesidze asifanele njengoba bendabuko iresiphi khachapuri nge Puff khekhe ushizi inikeza izingcezu nje enkulu ushizi. Lokhu kuyadingeka ukuze igcwale amanzi, bathi athambile futhi tastier.
Engeza eyodwa iqanda elilodwa isipuni bhotela. Hlanganisa konke endishini enkulu.
Unikezele ngezinsizakalo Puff khekhe kumuntu ukushuba mayelana 5 kwangu. Sika izikwele zawo futhi ishabalale ukugxusha.
Bond angles ongcono kakhulu 'ezimvilophini ". Ngakho ngeke livulwe, futhi ngeke ulahlekelwe ingxenye ukugcwaliswa.
Uma uphawu imiphetho "imvilophu", udinga uyaziveza maqondana maphakathi. Ukwenza lokhu akudingekile, ngoba esitolo, ungakwazi ngokuvamile ukuthola imikhiqizo enjalo - ngesimo ezimvilophini, kodwa bendabuko iresiphi khachapuri ushizi Puff khekhe, okuyinto ethandwa emazweni ase-Asia, kusho umumo oyindilinga.
Ekuqiniseni umkhiqizo, wena faka it nikela on eligcotshiswe ngamafutha emalungeni ithebula ibhotela iphuma ne pin rolling. Kufanele uthole ayisicaba ezidinga wagqoka eligcotshisiwekuhovini baking sheet bafakwa kuhhavini.
Kufanele shisisa kuhhavini degrees 250. Khachapuri gazinga cishe imizuzu engu-20, lokhu kwanele ngempela ukwenza propeklos inhlama, kanye ushizi Incibilikile ngokuphelele.
Ngemuva kwemizuzu engu-20, athathe okuholela imikhiqizo ebomvana ubanikeze isikhathi sokwehlisa umoya. Amafutha lubricating akudingekile. Kufanele uthole crispy ngaphandle futhi ethambile ngenxa noshizi ngaphakathi.
Njengoba ubona, lokhu khachapuri iresiphi nge ushizi Puff khekhe kulula kakhulu ukuba asebenze. It akusho ukusetshenziswa ukudla exotic, ukulungiselela ikhekhe ngokushesha. Esimweni lapho udinga ngokushesha apheke okuthile okumnandi for izivakashi khachapuri - i choice omuhle, ngoba akuzona kuphela ezihlwabusayo, kodwa futhi ukudla okunempilo ngenxa semali ushizi.
Indlela yokwenza lemonade ekhaya? Izindlela zokupheka eziningi ezithakazelisayo
Ukuthenga izakhiwo "amachibi amahlanu". Incazelo
I-RVG (rheovasography) yamaphethelo aphansi: izici, isimiso sokwenza, ukucacisa kanye nemigomo